Baasaaboorka dadka shiheeyaha - Migrationsverket
/ Baasaboorka ajnebiga
Baasaaboorka dadka shiheeyaha
Främlingspass – somaliska
Adiga oo haysanin baasaaboor, iyo fursad mid ku soo suubsankartid, waxaa mararka qaarkood ka helikartaa Hey’adda socdaalka baasaaboorka dadka shisheeyaha.
Taas waxey quseysaa tusaale ahaan adiga oo la siiyay sharciga deggenaanshada oo Iswiidhan oo lagaa dhifaacaayo hey’addaha wadankaadii hooyo oo sidaas daraadeed aadan la xiriirikarin sidaa baasaaboor u suubsatid. Haddii adiga sharciga deggenaanshada lagu siiyay uu yahay dhifaacid aanan ku shaqo heleen hey’addaha wadankaada hooyo, tusaale ahaan dhibaato sharaf dhac, masiibooyinka dabeecadda ama xaalada guud oo wadanka hooyo, waxaa la xiriiri hey’adda wadankaaga sidaa u heshid baasaaboor.
Hey’adda socdaalka waxey qiimeyntooda ku saliyey santahay sababaha oo go’aankaada magangelyodoonka iyo qiimeynta waxaa loo suubin shakhsikasto gooni. Iney adag tahay, dhib badan tahay ama qaali tahay in la suubisto baasaaboorka wadanka hooyo ma’ahan sababo lagu heli karo baasaaboorka dadka shisheeyaha.
Haddii aad haysato dokumenti kale oo baasaaboor u dhigmo, oo ku safri kartid, Hey’adda socdaalka kuma siineyso baasaaboorka dadka shisheeyaha. Hey’adda socdaalka ma u suubineyso baasaaboorka dadka shisheeyaha qof wadankiisa hooyo joogo.
Soo codsashada oo baasaaboorka dadka shisheeyaha
Adiga haddii aad soo codsaneysid baasaaboorka yar waxaa soo buuxin foomka Codsashada baasaaboorka dadka shisheeyaha, oo lambarka foomka 190011 [Ansökan om främlingspass, nr 190011], iyo waa in adiga shakhsiyan soo booqataa oo keenta xafisyada Hey’adda socdaalka oo oggolanshada bixiyo midkood. Inta aadan adiga soo booqan Hey’adda socdaalka sidaa codsigaada u soo gudbisid, waa inaa koow wakhti ballan suubsataa. Adiga waa in wakhti ballan u suubisid shakhsikasto oo doonaayo inuu codsado baasaaboorka dadka shisheeyaha, iyo shakhsikasto waa inuu soo buuxiyaa foomka codsiga.
Codsashada baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 190011 (oo iswiidhish)
Application for alien's passport, form number 191011 (oo ingiriis)
Inta ka sii akhriso sida la suubiyo marka la codsanaayo baasaaboorka dadka shisheeyaha
Wakhti ballanso sidaa codsiga usoo gudbin kartid www.migrationsverket.se/book-appointment
Carruurta da’doodu ka yar tahay 18 sano
Carruurta da’doodu ka yar tahay 18 sano keliyood ma codsankaraan baasaaboorka dadka shisheeyaha. Canuga qofka mas’uulka ka ah ama qofka mas’uulka looga dhigay baa shakhsiyan u soo codsankaro baasaaboorka dadka shisheeyaha canugaas.
Haddii canugu uu leeyahay labo mas’uul waa khasab in labada waalid ay ansaxiyaan codsigaas oo ey soo wada saxiixaan foomka oggolanshada[blanketten Medgivande] oo in Hey’adda socdaalka u suubixinkarto carruurta ka yar 18 sano baasaaboorka dadka shisheeyaha, lambarka foomka 246011, oo la soo raacin foomka codsiga oo canuga.
Oggolanshada in Hey’adda socdaalka u suubinkarto baasaaboorka dadka shisheeyaha carruurta ka yar 18 sano, lambarka foomka 246011 (oo iswiidhish)
Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (oo ingiriis)
Dadka inta ugu badan waa khasab iney bixiyaan lacag markey codsanaayaan baasaaboorka dadka shisheeyaha. Adiga kharashkaas waxaa ku bixin kaar markaa codsiga keeneysid, ama laguu soo diri waraaqada lacagta lagu oo dib baa ka bixin lacag. Hey’adda socdaalka waxey bilaabi iney ka shaqeyso codsigaada markaa adiga bixisid kharashka.
Kharashyada oo baasaaboorka dadka shisheeyaha
Wakhtiga ey qaadaneyso
Bogga internetka oo Hey’adda socdaalka ayaad ka akhrisan kartaa wakhti ey qaadaneyso ka shaqeynta codsiga iminka la joogo. Go’aanku wakhti dheer ayuu qaadanayaa haddii shaqaalaha kaa soo codsadaan warbixin dheeraad ah.
Marka ey Hey’adda socdaalka ka shaqeyso codsigaada waxaa ciwaanka gurigaada kugu soo diri go’aanka.
Inta baa ka sii akhrisankartaa iminka la joogo wakhtiga ey qaadaneyso ka shaqeynta baasaaboorka dadka shisheeyaha.
Soo qaadashada baasaboorka la siiyo dadka shisheeyaha
Baasaboorkaaga waxaad ka soo qaadanaysaa qaybta oggolaanshaha ama xarunta adeega taas oo ahayd meeshii aad markii hore baasaboorka ka codsatay, haddii aanad helin warbixin sheegaysa inaad baasaboorka meelkale ka soo qaadatid. Haddii aad doonayso inaad baasaboorka meelkale ka soo qaadatid waxaad arrintaa kala hadlaysaa shaqaalaha marka aad codsiga dhiibanaysid..
Waa inaad soo qaadatid warqad aqoonsi ah oo shaqaynaysa oo adiga ku caddaynasa marka aad baasaboorka dadka sheesheeyaha la siiyo soo qaadanaysid.
Wakhtid ballanso si aad baasaboorka u soo qaadatid. (Adeega ballan qabsashadu waxay ku kala qoran yihiin luqadda iswiidhishka iyo luqadda ingiriiska oo keliya).)
Ku safar baasaaboorka dadka shisheeyaha
Baasaaboorka dadka shisheeyaha wuu buuxin shuruudaha Midwooga yurub oo arrimaha baasaaboorada iyo dhammaan wadamada oo dhan waa loogu safari kara. Wadamada qaarkood waxaa u baahankarta fiiso. La xiriir wadankaas safaaradiisa sidaa warbixin kale u heshid inta aadan safrin.
Haddii sharciga deggenaanshada sababta laguu siiyay ey tahay u baahnansho dhifaac weey ku qornaan baasaaboorkaada oo dadka shisheeyaha, inaad u safrikarin wadankaadi hooyo ama wadankii aad ka soo qaxday.
Haddii adiga aadan caddeynkarin shakhsiga aad tahay weey qornaan baasaaboorka dadka shisheeyaha in la caddeyn shakhsiga aad tahay, oo taasna waxey adkeen kartaa in wadamada qaarkood aad u safarto.
Ilaa intee buu baasaaboorka ansaxsanaan
Baasaaboorka dadka shisheeyaha wuxuu ansaxsanaan caadiyan shan sano iyo ma’ahan suurtagal in wakhtigiisa la dheereeyo. Haddii aad u baahantahay baasaaboorka dadka shisheeyaha markey dhammaato muddadii uu ansaxsanaa adiga waxaa soo codsan mid cusub.
Markaa soo codsaneysid baasaaboorka dadka shisheeyaha waa khasab in adiga markale lagu sawiro iyo farahaada la sawiro, maadaama sawirkaada iyo farahaada eysan ku keedsaneen Hey’adda socdaalka, kaliya ku keedsanyahiin elektaroonig ahaan baasaaboorka dadka shisheeyaha.
Haddii baasaboorkaada kaa lumo
Haddii baasaboorka dadka shisheeyaha kaa lumo ama adiga lagaa xado, adiga waa inaa koow dacwo boliis suubsatid. Haddii aad u baahantahay mid cusub oo baasaboorka dadka shisheeyaha waa qasab in adiga codsi cusub soo suubsatid. Horey usoo qaado kobi dacwada boliiska oo adiga bostada laguugu soo diray ama xafiiska boliiska ku siiyeen marka aad noo imaaneysid sidaa u dalbatid mid cusub oo baasakoorka dadka shiheeyaha.
Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka dadka shisheeyaha
Haddii adiga diidmo lagaa siiyo codsigaada
Adiga rafcaan waa ka qaadankartaa go’aanka Hey’adda socdaalka haddii diidmo kaa siiyaan codsigaadi oo baasaaboorka dadka shisheeyaha iyo codsigaadi oo sharciga deggenaanshada isla halmar.
Haddii aad rafcaan qaadaneysid waxaa ku soo qori waraaqad, oo waxaad ku soo qori go’aanka aad dooneysid in Hey’adda socdaalka badasho, sababta adiga go’aanka kuula qaldanyahay. Waraaqada waxaad ku soo qori warbixintaada iyo lambarka arrintaada, iyo waa khasab in adiga waraaqada soo saxiixdid.
Waa iney helaan Hey’adda socdaalka rafcaankaada ugu dambeyn saddex isbuuc laga soo bilaabo maalintii adiga go’aanka ka warheshay.
Haddii aad dooneysid in qofkale rafcaanka kuu suubiyo waxaa khasab in adiga qofkaas siisid qoral oggalansho oo wakiilnimo.